Galfatoota (kasaa aabbaatiin)
Dhangii tartiib-qubee galfatoota kasaa ifteessi.
Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun kasii tarree qubee yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun kasii tarree qubee yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu
Sadarkaa "S", matadureewwan qubee baaqqee, warra galfataawwan kasaa haala aabaatiin qoodamaniif wabii taha.Matadureewwan aangaasuuf, sanduqa filannooDaangessaa aabaa, bakka Dhangiikessatti, filadhu.
Galfatoota guddaaa dhaaf, Akkaataa Arfii
Akkaataa dhangeessuu kasaa aabbaa keessaa galfatoota guddaaaf ifteessi. Galfata kasaa tokko gara galfata guddaaatti jijjiiruudhaaf, fulduree dirree kasaa galmee keessaa cuqaasitii, kana booda Gulaali - Galfata Kasaa filadhu.
Jalqaba qubeewwanii akkaataa aabbaan tarreefamaan akka kutaa mataduree galfatoota kasaatti fayyadama.
furtuun qoodduuwwaniin addaanba'aan
Sararaa tokko irratti galfatoota kasaa qoodduuwwaniin addaanba'aan qindeessa.
Title is: Galfatoota (kasaa aabbaatiin)